လိုပီတီဂူ ကို ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် စပိန်အသင်းတွင်း ပုန်ကန်မှု မရှိဟုဆို၊ အပြောင်းအလဲ အနည?? - Yangon Media Group
စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌရူဘီ ယာလက်စ်က ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲစတင်ရန် တစ်ရက်အလိုတွင် နည်းပြလိုပီတီဂူကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခဲ့သော်လည်း ယင်းဖြစ် ရပ်ကြောင့် ကစားသမားများ၏အသင်းတွင်း ပုန်ကန်မှုမရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
လိုပီတီဂူအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အပြီးတွင် ရီးရဲလ်နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူမည်ဟု ကြေညာခါနီးတွင်မှ စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို အသိပေးခဲ့သည့်အတွက် ဥက္ကဋ္ဌရူဘီယာလက်စ်က ဒေါသထွက်ခဲ့ပြီး တစ်ရက်အကြာတွင် စပိန်နည်းပြရာထူးမှ လိုပီတီဂူကိုထုတ်ပယ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ လိုပီတီဂူကို ထုတ်ပယ်ခြင်းမပြုရန် ကစားသမားများက အဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူများထံတောင်းဆိုမှုမှာ အရာမထင်ခဲ့ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း နည်း ပြကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အသင်းမှ ကစားသမားများ၏ ပုန်ကန်မှုမရှိ ကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌရူဘီယာ လက်စ်ကရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ရူဘီယာလက်စ်က ”အားလုံးပြောချင်တာကို ကျွန်တော်နား ထောင်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ ကျွန် တော်ပဲချမှတ်ခဲ့တာပါ။ ကစားသမားတွေအ နေနဲ့ အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြပြီး အသင်းတွင်းပုန်ကန်မှုဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူး။ ဟီယာရိုကိုကြိုဆိုကြသလို သူနဲ့အတူသေသည်အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားကြမယ်လို့လည်း ပြောဆိုထားကြပါတယ်။ အသင်းခေါင်း ဆောင်ရာမို့စ်နဲ့လည်း ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး”ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
လိုပီတီဂူကိုထုတ်ပယ်ခဲ့အပြီးတွင် စပိန်အသင်းကို ယူ-၂၁နည်းပြ ဆီလာဒက်စ်က တာဝန်ယူဖွယ်ရှိကြောင်းသတင်း ထွက်ခဲ့သော်လည်း ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှာ အားကစားဒါရိုက်တာဟီယာရိုကို တာဝန် ပေးခဲ့သည်။ ဟီယာရိုက ”ပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲမတိုင်ခင် အချိန်အများကြီးမကျန်တော့လို့ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တိုင်းမှာ နေ့တိုင်းလိုလိုကျွန်တော်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဟီယာရိုသည် ယခင်က စပိန်ဒုတိယ တန်းကလပ် အိုဗီဒိုကိုတာဝန်ယူဖူးသည်မှာ တစ်ခုတည်းသောနည်းပြအတွေ့ အကြုံ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ၎င်းကိုခန့်အပ်ခြင်းအ ပေါ်မေးခွန်းထုတ်မှုများရှိခဲ့သည်။
၂ဝ၂၆ ကမ္ဘာ့ဖလား အိမ်ရှင်အဖြစ် မြောက်အမေရိက ပူးတွဲအိမ်ရှင်များ ရွေးချယ်ခံရ
မန္တလေး အလုပ်အကိုင် ပြပွဲကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီကြီး ၂၅ ခုမှ အလုပ်အကိုင် ??